ny Flash |
ny Flash mitondra anao any amin'ny tanàna mitaingina araka izay maha-olona haingana indrindra eto an-tany no ho afa-tsy ny sivilizasiona avy malaza mpanao heloka bevava. Ny toetra amam-panahy ny Barry Allen dia iray amin'ireo endri-tsoratra malaza indrindra amin'ny boky an-tsary sy ny Amerikana DC tantara an-tsary series. Kapiteny Cold, Mirror Master, ary Gorilla Grodd dia aseho toy ny mpanao heloka bevava ao amin'ny lalao sy ny tsirairay amin'izy ireo dia manolotra maro ny lafin-javatra mahaliana tombony manerana ny slot.
Ny mpamorona ny slot mahafinaritra ity no NextGen Gaming. Ny orinasa dia ho eo an-dalam-pandrosoana, ary nanaovany lalao rindrambaiko ho an'ny Casino lalao hatramin'ny 1999. Games like ny Flash hanaporofo ny tenany ao amin'ny orinasa. Ny orinasa dia hiezaka foana mankany amin'ny fananganana ny raharaham-barotra amin'ny alalan'ny fisainana vaovao sy fomba mampientam-po ny fanaovana ny lalao manala-feno raha mifikitra ny fototry ny slot lalao. Ny orinasa dia voafehin'ny ny UK filokana asa.
Namorona ny 5 reels, ny Flash tolotra 50 paylines. Ny tombony Wild marika dia ny Flash kisary izay manampy manatona ny mpandresy tsikombakomba ho anareo amin'ny 3x multiplier. Ny marika iray hafa haeliko Flash matoanteny ny tselatra. Afaka manolo rehetra marika hafa afa-tsy ny tombony sy ny bibidia sy ny tolotra mariky 5000 vola madinika raha mitantana ny mamantatra ny roa tamin'izy ireo teo amin'ny nandresy payline.
The feature of bonus bets in the game brings more wild symbols and hence more winning combinations are up for grabs. Izy ireo manolotra 5x multiplier rehetra ny Fandresena. Ny maimaim-poana anefa spins mandresy hanome anao 10x multiplier ho an'ny Fandresena. Ny hafa dia ny fitsipika sariohatra karatra fanehoana an'ohatra. Anisan'ny mahaliana ireo endri-javatra ireo sy ny Rogue tampon-tanety ny endri-javatra. nahazo 3 na mihoatra tombony marika eo amin'ny reels nandritra ny tombony filokana endri-javatra, ianao dia ho zatra ny Kapiteny Mangatsiaka,, Gorilla Grodd , ary ny endri-javatra Master Mirror. Ny Kapiteny hatsiaka manolotra hatsiaka fanitarana tampon-tanety amin'ny maimaim-poana re-kofehy ireny. Gorilla Grodd, na izany aza, manome anao ny kisendrasendra teleporting tampon-tanety mampiseho sy Mirror Tompo mahatonga anao hijery ny farany 4 maimaim-poana spins.
Raha mijery ny haben'ny endri-javatra mahaliana ao amin'ny slot, ny Flash dia lehibe hira ao an-tsena. Noho izany, atao ho an'ny ny mandresy spree! Ianao noraisin'ny mahagaga sary kalitao, mahavariana feo sy ny sary ao amin'ity miavaka slot. Ianao tsy maintsy ho tia ny mahagaga sary 3D, ary mazava ho azy goavana jackpots, mba azo antoka fa tsy afaka miandry intsony!